Soosaarayaasha 'Aprons' - Shirkadaha Wax Soosaarka & Warshadaha Shiinaha
Nooca CHECKEDOUT Shayga Shayga U3061D037049U Cabbirka KOOXDA Erayada furaha ah ee loo yaqaan 'chef half apron', maqalka shiraaca shiraaca ah, shiraaca shiraaca ah Farshaxanka shiraaca ah ee 85/15 poly / cudbida siligga polyester-ka ayaa sidoo kale loo yaqaannaa dunta adag. Badanaa waxaa loo yaqaanaa (bead light). Kaas oo ah mid u adkeysi badan, jajaban hoose, iyo deganaansho kiimikaad oo wanaagsan. Sababtoo ah itaalkeeda sare, iska caabin fiican, ciribtir hooseeya, hygroscopicity wanaagsan iyo iska caabin kulul, polyester yarn waa iska caabinta u adkaysata, u adkaysashada caaryada, ...
Xarkaha buluuga ah ee Buluugga ah oo wata Boorar U369S119000AG
Nooca CUDURKA CODEYNTA CU369S119000AG Cabbirka KALKA KOOWAAD Erayada furaha ah ee loo yaqaan 'chef wain apron,' apron oo leh jeebado Wejiga "70/30 poly / cudbi GSM.265g" tolida Xargaha Polyester thread waxaa sidoo kale loo yaqaannaa dunta adag. Badanaa waxaa loo yaqaanaa (bead light). Kaas oo ah mid u adkeysi badan, jajaban hoose, iyo deganaansho kiimikaad oo wanaagsan. Sababtoo ah itaalkeeda sare, iska caabin fiican, ciribtir hooseeya, hygroscopicity wanaagsan iyo iska caabin kulul, polyester yarn waa iska caabinta u adkaysata, u adkaysashada caaryada, iyo ...
Xabbad Joogto ah oo Jilbaal ah oo leh Boorar U369S118000AG
Nooca CHECKEDOUT Shayga COD Code CU369S118000AG Cabbirka KALKA KOOXAHA Erayada furaha ah ee loo yaqaan 'chef wain apron', apron oo leh jeebadaha Wejiga "70/30 poly / cudbi GSM.265g" tolo string Polyester thread sidoo kale waxaa loo yaqaan 'thread thread xoog-sareeya. Badanaa waxaa loo yaqaanaa (bead light). Kaas oo ah mid u adkeysi badan, jajaban hoose, iyo deganaansho kiimikaad oo wanaagsan. Sababtoo ah itaalkeeda sare, iska caabin fiican, ciribtir hooseeya, hygroscopicity wanaagsan iyo iska caabin kulul, polyester yarn waa iska caabinta u adkaysata, u adkaysashada caaryada, iyo ...
Brown Waiter Wajiga Apron oo wata jeebado U369S117000AG
Nooca CHECKEDOUT Shayga COD Code CU369S117000AG Cabbirka KALKA KOOXE Erayada furaha ah ee loo yaqaan 'chef wain apron,' apron oo leh jeebadaha Wejiga "70/30 poly / cudbi GSM.265g" tolo Xargaha Polyester thread waxaa sidoo kale loo yaqaannaa dunta adag. Badanaa waxaa loo yaqaanaa (bead light). Kaas oo ah mid u adkeysi badan, jajaban hoose, iyo deganaansho kiimikaad oo wanaagsan. Sababtoo ah itaalkeeda sare, iska caabin fiican, ciribtir hooseeya, hygroscopicity wanaagsan iyo iska caabin kulul, polyester yarn waa iska caabinta u adkaysata, u adkaysashada caaryada, iyo ...
Muuqaal JOOJIN AH Xeerka Shayga U332D4022T Cabbirka KALKA KHARASH ereyada furaha ah ee loo yaqaan 'chef apron', waardiye denim apron, Dhar gaaban dhexda dharka 2/80 poly / suuf GSM.346g Xarka tolida Xarka polyester-ka ayaa sidoo kale loo yaqaan dunta xoogga. Badanaa waxaa loo yaqaanaa (bead light). Kaas oo ah mid u adkeysi badan, jajaban hoose, iyo deganaansho kiimikaad oo wanaagsan. Sababtoo ah itaalkeeda sare, iska caabin fiican, ciribtir hooseeya, hygroscopicity wanaagsan iyo iska caabin kulul, polyester yarn waa iska caabinta u adkeysi badan, adkeysi u leh khafiif ...
Black Denim Multi Pocket Waiter Chef Short Waist Apron U332D3913T
Muuqaal JOOJINTA Qodobka Shayga U332D3913T Cabbirka KOOBKA Erayada ereyada muhiimka ah ee loo yaqaan 'chef apron', waardiye denim apron, Dhar gaaban dhexda dharka 2/80 poly / suuf GSM.346g Xarka tolida Xarka polyester-ka ayaa sidoo kale loo yaqaan dunta xoogga-sareeya. Badanaa waxaa loo yaqaanaa (bead light). Kaas oo ah mid u adkeysi badan, jajaban hoose, iyo deganaansho kiimikaad oo wanaagsan. Sababtoo ah itaalkeeda sare, iska caabin fiican, ciribtir hooseeya, hygroscopicity wanaagsan iyo iska caabin kulul, polyester yarn waa iska caabinta u adkeysi badan, adkeysi u leh khafiif ...
Dharka cad ee cad ee 'poly poly' oo ah wajiga tufaaxa dheer ee U316S0200A
Nooca CHECKEDOUT Shayga Qodobka U316S0200A Cabbirka KOOX SIINE Erayada ugu muhiimsan nus, garabka dhexda madoow, garka muruqyada, makhaayadda waardiyaha, dharka jikada 65/35 poly / suufka GSM.235g Xinjiang Aksu suuf dhaadheer dhaadheer, wax aan wax qorin, maya-u-ruxin, majirto kansar, nolosha adeegga ayaa 2 jeer ah jaakad qafiif ah oo joogto ah. Dunta tolida polyester-ka ayaa sidoo kale loo yaqaan 'thread thread xoog-sare'. Badanaa waxaa loo yaqaanaa (bead light). Kaas oo ah mid u adkeysi badan, jajaban hoose, iyo deganaansho kiimikaad oo wanaagsan. Sababta i ...
Dharka cad ee cad ee 'poly poly' oo ah wajiga dhexda tufaaxa U316S0100A
Nooca CHECKEDOUT Shayga Shayga U316S0100A Cabbirka SI KOOX AH Erayo muhim ah kala badh, garabka dhexda madoow, sariiraha chef, apron, warshada jikada 65/35 poly / suuf GSM.235g Xinjiang Aksu suuf dhaadheer dhaadheer, wax aan wax siibin, maya-u-ruxin, majirto kansar, nolosha adeegga ayaa 2 jeer ah jaakad qafiif ah oo joogto ah. Dunta tolida polyester-ka ayaa sidoo kale loo yaqaan 'thread thread xoog-sare'. Badanaa waxaa loo yaqaanaa (bead light). Kaas oo ah mid u adkeysi badan, jajaban hoose, iyo deganaansho kiimikaad oo wanaagsan. Sababta i ...
Cufnaanta Cufan ee Cufan ee Dhegaanta leh ee leh "Poly" Chef Cuntada Dheer oo ay ku jiraan jeebado U311S0200A
Nooca CHECKEDOUT Shayga Shayga U311S0200A Cabbirka KOOX SIINE Erayada ugu muhiimsan nus, garabka dhexda madoow, garka, chron, waardiyaha wajiga, Jumlada jikada 65/35 poly / suufka GSM.235g Xinjiang Aksu suuf dhaadheer dhaadheer, wax aan wax qorin, maya-u-ruxin, majirto kansar, nolosha adeegga ayaa 2 jeer ah jaakad qafiif ah oo joogto ah. Dunta tolida polyester-ka ayaa sidoo kale loo yaqaan 'thread thread xoog-sare'. Badanaa waxaa loo yaqaanaa (bead light). Kaas oo ah mid u adkeysi badan, jajaban hoose, iyo deganaansho kiimikaad oo wanaagsan. Sababta i ...
Buugga madow ee loo yaqaan 'Black Poly Cotton Chef Long' oo leh Boorsooyin U311S0100A
Nooca CHECKEDOUT Shayga Shayga U311S0100A Cabbirka SI KOOX AH Erayo muhim ah kala badh, garabka dhexda madoow, gogo 'chef, apron, warshada jikada 65/35 poly / cudbi GSM.235g Xinjiang Aksu suuf dhaadheer dhaadheer, wax aan wax qorin, maya-u-ruxin, majirto kansar, nolosha adeegga ayaa 2 jeer ah jaakad qafiif ah oo joogto ah. Dunta tolida polyester-ka ayaa sidoo kale loo yaqaan 'thread thread xoog-sare'. Badanaa waxaa loo yaqaanaa (bead light). Kaas oo ah mid u adkeysi badan, jajaban hoose, iyo deganaansho kiimikaad oo wanaagsan. Sababta i ...
Jiin Dheecaan ah oo Jiif ah oo Dheel Dheel ah oo Dheel Dheel ah oo leh Hal Pocket U306S0500A
Nooca CHECKEDOUT Shayga Shayga U306S0500A Cabbirka KOOX SIINE Erayada furaha ah ee jeebka la gashado, waardiyaha dhegaha, tufaaxa nuska ah, calafka calafka saabuun 65/35 poly / suuf GSM.235g Xinjiang Aksu suuf dhaadheer dhaadheer, aan wax cabbin, wax ruxin, majiro kansar, nolosha adeega ayaa 2 jeer ah jaakad qafiif ah oo joogto ah. Dunta tolida polyester-ka ayaa sidoo kale loo yaqaan 'thread thread xoog-sare'. Badanaa waxaa loo yaqaanaa (bead light). Kaas oo ah mid u adkeysi badan, jajaban hoose, iyo deganaansho kiimikaad oo wanaagsan. Awooddeeda sare awgeed, ...
Dharka cad ee dharka cad ee dharka cas ee loo yaqaan 'Wind Red Poly Want' oo leh hal Pocket U306S0400A
Nooca CHECKEDOUT Shayga Qodobka U306S0400A Cabbirka SI KOOX AH Erayo muhiim ah oo jeebka kujira, waardiyaha waardiyaha, dhegaha madow ee wajiga / dharka 65/35 poly / suufka GSM.235g Xinjiang Aksu cudud dhaadheer oo dhaadheer, bilaa biya-shubis ah, aan ruxin, lahayn kansar, nolosha adeega 2 jeer waa jaakad qafiif ah oo caadi ah. Dunta tolida polyester-ka ayaa sidoo kale loo yaqaan 'thread thread xoog-sare'. Badanaa waxaa loo yaqaanaa (bead light). Kaas oo ah mid u adkeysi badan, jajaban hoose, iyo deganaansho kiimikaad oo wanaagsan. Awooddeeda sare awgeed, baabi'in wanaagsan ...